Apple Music Yekuzivisa iyo 2019 Grammy Mubairo Vakasarudzwa Live | Ndinobva mac
Apple Music kuzivisa 2019 Grammy Mubairo vanosarudzwa kurarama
Mumwedzi ichangopfuura tiri kuona maitiro Apple ari kuita kuenderera kufamba kwekuyedza wedzera huwandu hwevashandisi vanoshandisa yavo yekumhanyisa mimhanzi chikuva. Mavhiki mashoma apfuura takakuzivisa nezve kufarira kwaApple kutora chikamu cheIHeart Media, iro rakakosha boka revairesi muUnited States.
Iko chete kufamba kwekushambadzira, kunyangwe kana zvichibvira, Apple Music, tinoiwana iri Chiziviso chekushambadzira mimhanzi sevhisi ye2019 Grammy vakasarudzwa, chiziviso chinofanira kuitwa Chishanu chinotevera. Vakasarudzwa vepamusoro vachaziviswa na8: 30 AM ET.
Rondedzero izere yevakadomwa mumapoka ese e84 achaziviswa pa8: 45am kuburikidza newebhusaiti yechikoro. Pane ino nguva, ese CBS neApple Music vachazivisa yakasarudzika rondedzero yevakasarudzwa, asi parizvino hazvizivikanwe kuti ndeapi mapoka acho, sezvatinogona kuverenga mumagazini yeVariety, asi zvinofungidzirwa kuti ichava inonyanya kukoshaIzvo zvaisazove zvine musoro kuti ivo vakasarudzwa vezvikamu vaizoziviswa vasina kukosha kudiki.
Kuziviswa kwevakasarudzwa veGrammy ve2019 kwakanonoka neakasiyana Mhemberero dzekurangarira dzakarongerwa kufa kweaimbove purezidhendi weUnited States George HW Bush. Zuva rekutanga rekuzivisa izvi raive ramangwana, Chitatu, asi rakazononoka kusvika Chishanu, Zvita 7.
Kugamuchidza iyo Grammys, inoenderana neye 61st edition ichave inotevera February 10, Ichave nhepfenyuro inorarama paCBS kubva kuStaples Center muLos Angeles, California. Mwaka wadarika, Apple yakashandisa iyo Animoji yakauya neiyo iPhone X kuzivisa gore rino vakasarudzwa veGrammy. Hatizive kana zvegore rino, vakomana vanobva kuCupertino vanozove nedzimwe nhau muchitoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Music kuzivisa 2019 Grammy Mubairo vanosarudzwa kurarama
Teregiramu yakagadziridzwa yeMac ichiwedzera rutsigiro rwekutenderera kwevhidhiyo
Shanduro yepamhepo inotanga kuuya ku Skype, kujoina PowerPoint kutanga kwa2019